Productions tonga ao amin'ny Premiere Pro hitantana tetikasa | Famoronana an-tserasera
Misy ny famokarana ankehitriny miaraka amin'ny Adobe Premiere: fitaovana vaovao hitantanana tetikasan-tsarimihetsika
Niandry ny Tonga any amin'ny Adobe Premiere ny famokarana. Androany izao rehefa nanangana an'ity fitaovana vaovao ity i Adobe hitantanana ireo tetikasan-tsarimihetsika ary mamela, ankoatry ny zavatra hafa, hizara loharano sy hitazona ny zava-drehetra voalamina amin'ny antsipiriany.
Fitaovana vaovao ho an'ny ireo izay miasa irery na ao anaty ekipa izay tsy maintsy zaraina ny loharanom-pahalalana ary avereno jerena ny fivoaran'io tetikasan-tsarimihetsika io miankina amin'ny haavo. Ity fitaovana vaovao ity dia avy amin'ny fitomboan'ny fidiran'ny Adobe Premiere eo amin'ireo mpanatontosa sarimihetsika satria ampiasain'izy ireo bebe kokoa.
Tamin'ny andiany teo aloha tamin'ny Sundance izy io rehefa namaky ny firaketany manokana ny Adobe Premiere tamin'ny fandraisana anjara tamina horonantsary maro hafa izay nampiasa Premiere Pro tamin'ny fanovana sy fanovana. Izahay koa miresaka momba izany sarimihetsika misy teti-bola ambonimbony kokoa toa ny Terminator: Lahatra maizina, no toeram-pitsapana tsara indrindra hitsapana ny mahasoa azy.
Ny iray amin'ireo sanda lehibe indrindra amin'ny Productions ho an'ny Adobe Premiere dia ny mamela mandrava tetikasa lehibe iray ho faribolana kely kokoa. Ny fizotran'ny asa dia azo zaraina amin'ny roul sy ny seho, ary ny famokarana tsindraindray (ireo mifandraika amin'ny vanim-potoana fahavaratra toy ny Krismasy na fahavaratra) dia azo atambatra isaky ny vanim-potoana.
Na ny ireo masoivoho dia manana fahaizana mandrindra atiny, toy ny filaharan'ny lohateny na singa audio, manomboka amin'ny famokarana ka hatramin'ny mpanjifa tsirairay ary miverina any aminy amin'ny fotoana rehetra mba hiasa amina tetikasa kanto iray hafa. Miresaka mazava tsara momba ny foibe fitantanana hitantanana ireo tetikasa samihafa izahay.
Ireo tetikasa rehetra fantatro dia ampidirina ao amin'ny fampirimana Productions lasa ampahany amin'izany izy ireo ary isaky ny misy fanovana atao amin'ilay fisie io dia hita taratra ao amin'ny Adobe Premiere Pro.
Adobe Premiere Productions Azo alaina izao manomboka anio miaraka amin'ny kinova farany, inona no andrasanao hanandramana azy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Misy ny famokarana ankehitriny miaraka amin'ny Adobe Premiere: fitaovana vaovao hitantanana tetikasan-tsarimihetsika